HABABKA XAKAMAYNTA CAYAYAANKA STRAWBERRY - STRAWBERRIES
Haddii aad u maleyneyso in walxaha nool oo kaliya ay u baahan yihiin in la ilaaliyo, markaa ma aha. Dhammaanteen waan jeclahay berrigan - strawberries, laakiin si ay u gaarto miiskeenna ammaan iyo codka, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso strawberries cayayaanka. Taasna waxaan ku caawin doonaa inaad ka garato.
Mid ka mid ah cayayaanka strawberry ugu khatarsan waa cayayaanka strawberry. Baaxaddiisu waa mid aad u yar oo ay adag tahay in la arko cayayaanka xataa iyada oo loo marayo galaas weyn. Haddii caleemaha strawberry ay yihiin kuwo xargoobo oo aan la geynin dhammaadka, ka dibna tani waa shaqada cayayaanka strawberry.
Halkan waxaa ah siyaabo aad ku ilaalin kartid lambarradooda iyadoo loo marayo in aadan ka takhalusi karin saxanka gebi ahaanba:
Cagaarshow waa in lagu beeraa meelo iftiin leh oo ka baxsan beertii hore.
Carrabku waa inuu noqdaa dabacsanaan la'aan.
Caleemaha hore waa in la gooyaa waqtiga.
Qalabka roodhida waa mid macquul ah in lagu iibsado dukaamada la xaqiijiyay.
Cunto strawberries waa in ay ahaato mid sax ah.
Ka dib markii goosashada daryeelka strawberry ka dib waa in aan joojin.
Waa muhiim! Sababtoo ah labiska dheelitirka ah strawberries aad ayuu u fududaan doonaa si ay ula qabsadaan weerarada saxda ah. Bacriminta, kuwaas oo ku jira nitrogen, waxay gacan ka geysan doontaa in si dhaqso ah loo kordhiyo caleemaha, iyo dhirta ubaxyada iyo caleemaha qashinka biostimulants (tusaale ahaan, Silk) iyo xalalka raad raacda ayaa siin doona koror ah dhalidda.
Adigoo raacaya qodobbadan, waxaad ku badbaadin doontaa strawberries aad u ammaan iyo cod.
Sidee looga takhalusi karaa nematodeska
Nematodes - Kuwani waa cayayaanka la yiraahdo cayayaanka strawberry. Haddii ay bilaabaan, muddo lix sano ah meelihii ay dhibaatadu saameysey waa inay ahaato mid cakiran. Haa, kama gudbi kartid cudurkan by macnaheedu yahay kiimikada.
Habka ugu muhiimsan ee lagula dagaallamo nematodes waa tallaalka cagaarshowga marmar ah. Waa laguu rajeynayaa inaad haysato fursad aad ku hesho meel cusub sanad walba.
Si looga takhaluso nematodeska, muhiim ma'aha inaad si toos ah u saameyso. Waxay ku filnaan doontaa inay ku cabsigeliso iyada oo ku beeri doonta dhowr marigolds, calendula ama nasturtium. Sidoo kale waa muhiim in la abuuro carrada. Waxay kobcisaa fangaska oo aan waxyeello u geysan dadka, oo ay burburiyaan dulin.
Siyaabaha loola dagaallamo weevil raspberry-strawberry
Si looga adkaado cayayaanka, sii daayo kale - qashin qubka.
Ma taqaanaa? Hal hal qaangaar ah oo qaangaar ah ayaa cuno 20 weelils maalintii.
Wixii strawberries ee dagaalka ka dhanka ah weevil waa in loo isticmaalo daaweynta this cayayaanka: "Fufanon", "Alatar", "Kemifos", "Novaktion". Laakiin waxaa haboon in la tixgeliyo in shaqada ka dib waxaad cuni kartaa strawberries kaliya saddex ama afar toddobaad kadib.
Sida loo ilaaliyo strawberries caarada caarada
Haddii aad ogaato in caleemaha strawberries ee shabakada, waxay si degdeg ah u noqdaan huruud ah oo qalalan, ka dibna tani waa trick caarada caarada. Si dhakhso ah uga takhaluso, waa inaad ku buufisaa baadiyaha leh xal karbofos.
Waxaa habboon in la sameeyo ka dib markii ururinta ugu dambeysay ee berry. Ka dib falalka badbaadinta, meesha la buufiyay waa in lagu daboolaa filim muddo saddex saacadood ah.
Sida loola dhaqmo weevil daacad ah
Walaashooyinka Dunida on strawberries waa cayayaan kuwaas oo ku quudin caleemo strawberry. Ma sahlana in la arko caleemo, maxaa yeelay, waxay u mahadcelineysaa miisaankeeda, si fiican ayaa loo qaxay sida midabka dhulka.
Habka dagaal waa arrin aad u fudud isaga oo leh: inta lagu guda jiro beerto, ubax iyo goosashada ka dib waxaan ku buufineynaa strawberries leh Aktar.
Ma taqaanaa? Weevils ayaa ah kuwa kaliya ee ka mid ah cayayaanka, laakiin inkastoo tan, qoyskooda waa mid ka mid ah kuwa ugu badan dunida ee xayawaanka waxayna ka badantahay 35,000 nooc. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah ayaan weli furmin.
Nidaamyada wax ka qabashada sawirrada strawberry
Waxaa jira cayayaanka sida strawberry sida sawirada strawberry. Waxay aad u fiican yihiin oo waxay cunaan godadka dhuuban-qaabeeya ee caleemaha strawberry.
Si looga adkaado, waa inaad isticmaashaa sunta cayayaanka. Wixii ka hortagga, waxaa lagama maarmaan ah in la qodo oo ciidda ka dabacsan duurka strawberry, weli waa suurad wacan in si buuxda uga takhalusi haramaha.
Sida loo wajaho alfalfa
Alfalfa mowers - Kuwani waa kuwa cuno cuncun strawberry bisha oo dhan. Dagaalka ugu waxtar badan ee ka hortagga cayayaanka wuxuu soconayaa inta lagu jiro quudinta guga.
Ka hor inta ubax of strawberries isticmaalaan daroogada sida "Basudin ama Diazinon", ka dib goosashada - "Talstar" ama "Decis".
Sida loo ilaaliyo strawberries ka yar yar yar oo madow
Xanuunkan wuxuu ka socdaa qoyska weevil. Dirxigeeda wuxuu waxyeeleeyaa xididdada strawberries oo afkoda dhulka hoostiisa ku jira, halka jiritaanka dadka waaweyni ay cunaan caleemo strawberry.
Waa muhiim! Kormeer dhirta xilliga gu'ga, haddii aad hore u aragtay koritaankooda saboolka ah. Bartamaha iyo dhammaadka xagaaga waa inaad hubisaa labadii usbuucba mar haddii caleemaha dhirta ay waxyeeleeyeen.
Marka jirooyinkaas soo baxaan, waa inaad ku buufisaa Olihlorcamphene, oo ah emulsion of gmtsg gamma isomer. Haddii aad aragto lamid ah guga, ka hor inta strawberries bilaabeen inay ubaxyada, waxaad u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan leh "Metafos".
Marka la raaco dhammaan xeerarka, qaababka iyo talooyin, waxaad si fudud uga takhalusi kartaa dhammaan cayayaanka.
Ka taxadar dhamaan jilitaanka oo ku raaxeeyso cawska beertaada.